Intaba, ukuHlola, kunye nokuPhila ngo-1919-2008
U-Edmund Hillary wazalwa ngoJulayi 20, 1919, e-Auckland, eNew Zealand. Kungekudala emva kokuzalwa kwakhe, intsapho yakhe yafudukela ngasemzantsi kweso sixeko ukuya eTuakau, apho uyise, u-Percival Augustus Hillary, athola umhlaba.
Ukususela esemncinci, uHillary wayenomdla wokuba ne-adventure kwaye xa wayeneminyaka engama-16, wakhangela ukunyuka kwentaba emva kokuya esikolweni waya eNtabeni Ruapehu, e-North Island yaseNew Zealand.
Emva kwesibini esikolweni esiphakeme, waqhubeka nokufunda izibalo kunye nesayensi kwiYunivesithi yaseAuckland. Ngomnyaka we-1939, uHillary wabeka iimfuno zakhe zokunyuka ukuvavanya ngokushwankathela i-Mounting Ollivier ezintabeni zase-Southern Alps kwi-6 342 ft (1,933 m).
Ekungeneni kwabo abasebenzi, uEdmund Hillary wanquma ukuba ngumfuyi wezinyosi kunye nomntakwabo uRex, kuba bekuyimisebenzi yonyaka eyamvumela inkululeko yokunyuka xa engasebenzi. Ngexesha lokuhamba kwakhe, u-Hillary wenyuka iintaba ezininzi eNew Zealand, iAlps, ekugqibeleni ama-Himalaya, apho ahlangabezane ne-11 ephakama ngaphezu kwamamitha angama-6.096 ephakamileyo.
USir Edmund Hillary kunye neNtaba Everest
Emva kokunyuka kwezinye iindawo eziphakamileyo, uEdmund Hillary waqala ukubeka amehlo akhe entabeni ephakamileyo yehlabathi, iNtaba Everest . Ngowe-1951 no-1952, wajoyina iiphando ezimbini zokuhlola kwaye waqatshelwa nguSir John Hunt, inkokeli yoluhambo olulungiselelwe ngo-1953 oluxhaswe yiKomiti ye-Himalayan edibeneyo ye-Alpine Club yaseBritani kunye neRoyal Geographic Society.
Ekubeni umzila weNorth Col kwi-Tibetan ecaleni kwentaba yavalwa ngurhulumente waseTshayina, uhambo lwango-1953 lwaluzama ukufikelela kuloo ngqungquthela ngendlela ye-South Col e- Nepal . Njengoko ukunyuka kwaqhubela phambili, bonke abantu ababethwele ukunyuka bahlaselwa entabeni ngenxa yokukhathala kunye nemiphumo yokuphakama okuphakamileyo.
Ababini abaphakamayo babesele bahamba noHillary noSherpa Gcina Norgay. Emva kokutshintshwa kokugqibela kwenyuka, lo mbini wenyuka kwi-summit 29,035 ye-Mount Everest ngo- 11: 30 ekuseni ngoMeyi 29, 1953 .
Ngelo xesha, u-Hillary wayengowokuqala ongeyena uSherpa ukuba afikelele kwiintlanganiso kwaye ngenxa yoko waba ngumntu owaziwayo emhlabeni wonke kodwa ngokugqithiseleyo e-United Kingdom kuba uhambo lwalukhokelwa yiBritani. Ngenxa yoko, u-Hillary waxhaswa ngu-Queen Elizabeth II xa yena kunye nabo bonke abagibelayo babuyela kweli lizwe.
Ukuhlolwa kwe-Post-Everest kaEdmund Hillary
Emva kokuphumelela kwakhe kwiNtaba uEverest, uEdmund Hillary waqhubeka ekhuphuka e-Himalaya. Nangona kunjalo, waphinde wenza iimfuno zakhe kwi-Antarctica kunye nokuhlola apho. Ukususela ngo-1955 ukuya ku-958, wahola inxalenye yeNew Zealand ye-Commonwealth Trans-Antarctic Expedition kwaye ngo-1958, wayeyingxenye yohambo lokuqala olusesikweni eMzantsi.
Ngo-1985, u-Hillary no-Neil Armstrong bawela i-Arctic Ocean baza bafika kwiNyakatho yePole, bamenza umntu wokuqala ukuba afinyelele zombini izibonda kunye nentlanganiso ye-Everest.
U-Edmund Hillary's Philanthropy
Ukongeza kwintaba kunye nokuhlolisiswa kwemimandla eyahlukeneyo ehlabathini lonke, uEdmund Hillary wayekhathalele kakhulu inhlalakahle yabantu baseNepal.
Ngexesha lama-1960, wachitha ixesha elininzi eNepal ekuncedeni ukuphuhlisa ngokwakhiwa kweekliniki, izibhedlele, nezikolo. Wayekwasekwa i-Himalayan Trust, umbutho ozinikele ekuphuculeni ubomi babantu abahlala e-Himalaya.
Nangona wancedisa ekuphuhliseni loo ndawo, uHillary wayenenkxalabo malunga nokuhlaziywa kwemeko ekhethekileyo yeentaba ze-Himalayan kunye neengxaki ezaziza kubakho ukhenketho nokufikeleleka. Ngenxa yoko, wakhuthaza urhulumente ukukhusela ihlathi ngokwenza indawo ejikeleze iNtaba ye-Everest ipaki kazwelonke.
Ukuze uncede olu tshintsho luqhube kakuhle, uHillary naye wancenga urhulumente waseNew Zealand ukuba anikezele uncedo kule mimandla yaseNepal eyayifuna. Ukongezelela, u-Hillary wanikela lonke ubomi bakhe kwimeko engqongileyo kunye nomsebenzi wabantu baseNepal.
Ngenxa yemisebenzi yakhe eninzi, uKumkanikazi uElizabethe II wabiza u-Edmund Hillary u-Knight we-Order ka-Garter ngo-1995. Wabe waba ilungu leNkundla yeNew Zealand ngo-1987 kwaye wanikezwa i-Polar Medal ngokuthatha inxaxheba kwi-Commonwealth Trans- I-Antarctic Expedition. Izitrato ezahlukeneyo kunye nezikolo eziseNew Zealand kunye neenxa zonke zehlabathi nazo zibizwa ngokuba yi-Hillary Isiteyithi, udonga oluthile lwe-rocky u-40 ft (12 m) olusemzantsi-ntshona ngaphaya kwentlanganiso ye-Mount Everest.
USir Edmund Hillary wabulawa ngesifo senhliziyo kwisibhedlele saseAuckland eNew Zealand ngoJanuwari 11, 2008. Wayeneminyaka engama-88 ubudala.
Yintoni i-Mackinder's Heartland Theory?
UAlfred Wegener: IsiGulane seMeteorologist saseJamani esiQinisekisa iPangea
UCaptain James Cook
I-PGA Tour Valspar Championship
'Indlu yeDololi' I-Synopsis
UHenry Hobson Richardson, uMenzi we-All-American Architect
Amazwe awona mazwe aphezulu kwihlabathi
Intshayelelo eNkosini Vishnu, uxolo lukaHindu-UThixo onothando
IiNkcukacha zeBlack King Crab kunye neNgcaciso
I-Polymers ye-Biological: iiprotheni, i-Carbohydrate, i-Lipids
Lithini IBhayibhile NgoKhuseleko Lonaphakade?
Ngaba Iziphumo zePollection zichanileyo?
Isishwankathelo seNcwadi ye-Iliad I
Amaxesha aPapasho aMaxesha aphakathi
Ukuphonononga: I-Timex Ironman Run Trainer Watch kunye ne-GPS ne-Monitor Rate Rate
Ukuguqula ii-Ounces zamanzi ezigidi
Indlela yokuba ngumdlali ojikeleze onke kwiVolleyball
Umthandazo Wokunqoba Inzondo
Ukubhala okuPhambili kunye neNcoko Isifundo: Iibhloko zokwakha i-Lego
Yiyiphi Ingqiqo Eyona Mkhulu: Inkcazo kunye nokuHlola
Indlela Yokucwangcisa Izixhobo Zeentyatyambo Ekhaya
Indlela yokuthelekisa iimilinganiselo kwi-Perl Ukusebenzisa abaMatshatsheli
I-Solstice yaseBusika: Ubusuku obude kakhulu
Zingakanani Izinto Ezifunekayo Emzimbeni Wakho?